Umatshini wokuvelisa isichumisi seNPK Extrusion Granulation Production - YiZheng Heavy Machinery Co., Ltd.
Sinamava apheleleyo kumgca wokuvelisa i-extrusion ye-extrusion eyomileyo. Asigxili kuphela kuyo yonke inkqubo yekhonkco kwinkqubo yemveliso, kodwa sihlala siqonda iinkcukacha zenkqubo nganye yemveliso kwaye siphumelele ngokugqibeleleyo kunxibelelwano. Inkqubo epheleleyo yemveliso yenye yeendlela eziphambili zokusebenzisana kwakho neYizheng Heavy Industries. Sinikezela ngezisombululo zemigca elungiselelwe wena ngokweemfuno zabathengi.
Akukho ukomisa umgca wemveliso ye-granulation enokuvelisa isichumisi esiphakamileyo, esiphakathi kunye nesisezantsi sezityalo ezahlukeneyo. Umgca wemveliso awudingi ukuba womile, notyalo-mali oluncinci kunye nokusetyenziswa kwamandla aphantsi.
Sinikeza iseti epheleleyo yemigca yokuvelisa i-granulation eyomileyo engadingi ukuba yome. Izixhobo zomgca wokuvelisa ikakhulu zibandakanya umxube, idisk feeder, umatshini wokuqengqa i-roller extrusion, umatshini we-roller sieve, ibhendi yokuhambisa, umatshini wokupakisha ngokuzenzekelayo kunye nezinye izixhobo ezincedisayo.
Njengomvelisi oqeqeshiweyo wemveliso yezixhobo zokuchumisa, sinika abathengi izixhobo zemveliso kunye nesona sisombululo sisiso kwiimfuno zamandla emveliso ezahlukeneyo ezinje ngeetoni ezingama-10,000 ngonyaka ukuya kwiitoni ezingama-200,000 ngonyaka.
Akukho ukomisa umgca wokuvelisa i-extrusion umgca obandakanya ukubetha okuzenzekelayo, ukuhambisa ibhanti, i-blender-axis blender, i-disc feeder, umatshini we-extrusion granulation, umatshini wokuhlola i-roller, indawo yokugcina egqityiweyo, umatshini wokupakisha ngokuzenzekelayo, njl.
2. Umxube wesichumisi seShaft esiphindwe kabini
3. Qengqa i-extrusion Granulator
4. Ijikelezisa iDrum Screene
5. Umatshini weMpahla yokuPakisha yeKhompyuter